MBILITE n’ọnwụ Jizọs abụghị ihe mere n’oge ochie nke na-enwechaghị uru ọ baara anyị taa. Pọl onyeozi mere ka a mata uru mbilite n’ọnwụ Jizọs bara n’akwụkwọ ozi o dere. Pọl sịrị: “E siwo ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite Kraịst, bụ́ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n’ụra ọnwụ. N’ihi na ebe ọnwụ si n’aka otu onye, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n’aka otu onye. N’ihi na dị nnọọ ka mmadụ niile na-anwụ n’ime Adam, otú ahụkwa ka a ga-eme ka mmadụ niile dị ndụ n’ime Kraịst.”—1 Ndị Kọrịnt 15:20-22.
A kpọlitere Jizọs n’ọnwụ n’abalị iri na isii n’ọnwa Naịsan nke afọ 33. Ọ bụ n’ụbọchị ahụ ka ndị Juu na-ewere mkpụrụ mbụ ha wetara n’ubi abịa n’ihu Jehova Chineke n’ụlọ nsọ ya dị na Jeruselem. Ebe Pọl kpọrọ Jizọs mkpụrụ mbụ, ihe ọ chọrọ ka anyị ghọta bụ na a ka nwekwara ndị ọzọ a ga-akpọlite n’ọnwụ.
Mgbe Pọl kwuchara na Jizọs bụ mkpụrụ mbụ, o kwuziri uru mbilite n’ọnwụ Jizọs bara. Ọ sịrị: “Ebe ọnwụ si n’aka otu onye, mbilite n’ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n’aka otu onye.” Anyị niile na-anwụ anwụ n’ihi mmehie na ezughị okè anyị ketara n’aka Adam. Ma, mgbe Jizọs nyere ndụ ya zuru okè ka ọ bụrụ ihe mgbapụta, o mere ka ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ nwee isi. Ihe a Jizọs mere ga-eme ka ụmụ mmadụ nwere onwe ha n’aka mmehie na ọnwụ. Ihe Pọl kwuru ná Ndị Rom 6:23 gosiri na nke a bụ eziokwu. Ọ sịrị: “Ụgwọ ọrụ nke mmehie na-akwụ bụ ọnwụ, ma onyinye nke Chineke na-enye bụ ndụ ebighị ebi site n’aka Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.”
Jizọs kwukwara uru ọnwụ ya na mbilite n’ọnwụ ya baara anyị. O kwuru banyere onwe ya, sị: “Otú ahụ ka a na-aghaghị iweli Nwa nke mmadụ elu, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee nwee ndụ ebighị ebi. N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.”—Jọn 3:14-16.
Chegodị echiche otú ndụ ga-adị mgbe ndị mmadụ na-agaghị anwụkwa anwụ, mgbe ha na-agaghị atakwa ahụhụ ma ọ bụ ruo uju! (Mkpughe 21:3, 4) Ndụ ga-adị ezigbo ụtọ! Otu ọkà mmụta kwuru, sị: “Ọ bụrụ na anyị ahụ ebe e liri ndị mmadụ, ọ na-echetara anyị na ndụ anyị dị mkpụmkpụ, ma mbilite n’ọnwụ na-echetara anyị na ọnwụ agaghị adịte aka.” N’eziokwu, mbilite n’ọnwụ Jizọs ga-eme ka anyị nweta ndụ ebighị ebi.
mailto:?body=Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Ga-eme Ka Ndị Ọzọ Nweta Ndụ Ebighị Ebi.%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013163%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Mbilite n’Ọnwụ Jizọs Ga-eme Ka Ndị Ọzọ Nweta Ndụ Ebighị Ebi.